Ikamelo elilodwa ekhaya - indlu enendawo yokubhukuda - I-Airbnb
Ikamelo elilodwa ekhaya - indlu enendawo yokubhukuda
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Centre-Val de Loire, i-France
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Didier
U-Didier Ungumbungazi ovelele
Amakhilomitha angu-5 ukusuka enkabeni ye- Orleans, emasangweni e-Sologne, siqasha ikamelo phezulu ukusuka endlini yethu.
Ngenkathi yonyaka engabizi kakhulu, elungele ukusebenza ukude, ukuqeqeshwa noma ukufunda, igumbi linedeski, i-wifi isebenza kahle.
Esikhathini sonyaka esiphakeme, ungajabulela indawo yokubhukuda efudumele nehlanganisiwe phakathi kuka-May no-September. Izivakashi zingaphumula ngaphansi kwezihlahla zesundu futhi zijabulele ingadi ehlelekile.
Phezulu endlini, unekamelo lokulala, ikamelo leshawa, igumbi lokugezela nendlu yangasese ehlukile. Kufanele kuqashelwe ukuthi ikamelo lesibili lezivakashi lingaqashwa kule ndawo yaphansi efanayo.
Ikamelo linombhede ongu-140 x 190, ideski nesihlalo, isibani esiseceleni kombhede eshalofini elincane, amarekhi ezingubo, isibuko esikhulu, indawo yokuphumula yesutikheyisi namahhuku.
Amashidi namathawula afakiwe esevisini.
Ngenza itholakale uma ngicela umbhede wesambulela wezingane.
Isiqandisi siyatholakala ezivakashini lapho zifika.
Esitezi sokuqala ungasebenzisa ikhishi nazo zonke izinto zalo, ikhishi elihlanganyelwa nabanikazi. Ungaba nokudla kwakho egumbini lokudlela noma ku-veranda (kuye ngenkathi yonyaka ngoba ayifudunyeziwe).
ubusuku obungu-7 e- Saint-Jean-de-la-Ruelle
Umphakathi uthule kude nemigwaqo enomsindo.
Ngitholakala ukukukhombisa izindawo ongazivakashela e-Or Orleans kanye nase-Sologne kuya ku-Chambord. Uma uthanda ukuhambahamba okude, ngingaphinde ngibonise ukuhamba emakhoneni athulile noma ezivakashi ngokuvumelana nezifiso zakho.
Isikhungo se-Orléans: 5 km
Gare d 'Orléans: 4 km
I-Bords de Loire : 3 km
Ukuma kwebhasi endaweni yama-Orléans/idolobha: amamitha angu-200
Isikhungo se-Zenith, e-Zenith:
9km Indawo yokuzijabulisa yase-Charlemagne Island: 10 km
Isiteshi samandla sase-Saint Laurent: 36 km
I-Bricy Air Base: 10 km
Chambord: 47 km
Loire ngebhayisikili: I-Orléans iyindawo ekahle kakhulu yokuma phakathi kwe-Sully phezulu ne-Blois phansi. Sitholakala ebhange elingakwesokudla elingamakhilomitha angu-3 ukusuka e-European Bridge.
Ngitholakala ukukukhombisa izindawo ongazivakashela e-Or Orleans kanye nase-Sologne kuya ku-Chambord. Uma uthanda ukuhambahamba okude, ngingaphinde ngibonise ukuhamba emakhoneni at…
UDidier Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Saint-Jean-de-la-Ruelle namaphethelo